June 2019 - Myannewsmedia
သင်္ချိုင်းကုန်းထဲမှာ ပေါက်တဲ့ မျှစ်ကို ချိုးယူပြီး စားလိုက်မိကြသောအခါ
By SPACEPosted on June 30, 2019
သင်္ချိုင်းကုန်းထဲမှာ ပေါက်တဲ့ မျှစ်ကို ချိုးယူပြီး စားလိုက်မိကြသောအခါ လူတစ်ယောက်က မေးတယ်… “ကိုဖိုးအေး ခင်ဗျား သင်္ချိုင်းထဲက မျှစ်တွေ ယူစားနေတာ မရွံ့ဘူးလား…? ဖြေ။ ။”ဘာရွံ့မလဲကွ လူသေကောင်က ထွက်တဲ့မျှစ်မှ မဟုတ်တာ မြေကြီးထဲက ထွက်တဲ့မျှစ်ပဲ […]
တိတ်တခိုး ချစ်နေတဲ့ ချစ်သူကို ပရိသတ်တွေ ဆီချပြ လိုက်တဲ့ အဆိုတော်မလေး ပိုပို ( ဗီဒီယိုဖိုင် )
အဆိုတော် သရုပ်ဆောင်မလေး ပိုပို ဟာ ပြည်သူချစ် အနုပညာရှင် တစ်ဦးဖြစ်ပြီး အလှူအတန်း ခဏခဏပြုလုပ်တတ် သူလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပိုဟာ မိဘတွေ မရှိတော့ဘဲ ကိုယ်တိုင်တစ်ဦးတည်း ရပ်တည်လာနိုင်သူ တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ဘ၀ အကြောင်းကိုလည်း ပရိသတ်တွေ ကို […]
ပေ့အတု အကောင့်အတုတွေနဲ့ ပက်သတ်ပြီး အိန္ဒြာကျော်ဇင် ပြောပြီ
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀ လောက်ကတည်းက အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ မော်ဒယ်တယောက်အနေနဲ့ ရပ်တည်ခဲ့ပြီး လက်ရှိမှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ထိပ်တန်းမင်းသမီး တယောက်ဖြစ်တဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင် ကိုတော့ မသိတဲ့သူမရှိလောက်ပါဘူး။ မင်းသမီး အိန္ဒြာကျော်ဇင် ကတော့ သူ့အနုပညာ သက်တမ်း တလျှောက်မှာတော့ […]
ကလေးမွေးပြီး ၄၅ ရက်ဆိုရင်အတူနေလို့ရပြီလား မရသေးဘူးလား ဆိုတာ ……
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်အပြီး မွေးဖွားပြီးချိန်မှာတော့ ပုံမှန်အနေနဲ့ ၄၅ ရက်ဆိုရင် အတူနေလို့ရပါပြီနော်။ အတူနေလို့ရပြီ ဆိုပေမယ့်လည်း တစ်ခုရှိတာကတော့ မိခင်က နို့တိုက်နေတဲ့အချိန်မှာ ပုံမှန်မျိုးဥက မကြွေတတ်တာကြောင့် ဟော်မုန်းပြောင်းလဲမှုတွေကတော့ ပုံမှန်မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း ခင်ပွန်းသည်နဲ့အတူတူနေထိုင်တဲ့အခါ နာတာ၊ မွေးလမ်းကြောင်းမှာ အောက်ကညှပ်ထားတဲ့အတွက် […]
အိမ်​​ထောင်​ပျက်​တဲ့ဒဏ်​​ကြောင့်​ စိတ်​ဓာတ်​ကျခြင်းဝေဒနာကို အကြီးအကျယ် ​​​ခံစား​နေရတဲ့ ​ဆောင်း​ဟေကို….
စိတ်​ထိခိုက်​စရာသတင်းတစ်​ခုဖြစ်​တဲ့ မင်းသမီး ​ဆောင်း​ဟေကိုရဲ့ လတ်​​တ​လော အိမ်​​​ထောင်​​ရေး​သောကမီးဟာ အခုအချိန်​မှသာ ပရိသတ်​​တွေသိရှိခွင့်​ရခဲ့​ပေမယ့်​ အိမ်​​ထောင်​​ရေးဘဝမှာ ဘယ်​လိုအချိန်ကတည်းက ဘယ်လိုအခက်​အခဲ​ပြသနာ​တွေနဲ့ လှိုက်စား​​နေခဲ့သလဲ ဆိုတာ ကာယကံရှင်​​တွေကလွဲပြီးဘယ်​သူမှအတိအကျမသိရှိနိုင်​ပါဘူး။ လက်​ရှိအချိန်​ မင်းသား ​ဆောင်​ဂျုံကီနဲ့ အိမ်​​ထောင်​ကွဲရအဖြစ်​ကို လူသိရှင်​ကြားဖြစ်​​စေခဲ့ပြီး​နောက်​ပိုင်း စိတ်​ဒုက္ခနဲ့ ဖိစီးမှုဒဏ်​ […]
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မိခင်တွေထဲကတယောက်မို့ သက်ငယ်မုဒိမ်းတရားဥပဒေစိုးမိုးစေရန် အကြီးအကဲများကိုတောင်းဆိုလိုက်တဲ့ အူဝဲ အူဝဲဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အအောင်မြင်ဆုံးပရိတ်သတ်အများဆုံးမင်းသမီးတလတ်ဖြစ်ပါတယ်။ထို့ အပြင်သူမဟာသမီးလေးတယောက်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှမိခင်တဦးဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ မှာတော့သူမကသက်ငယ်မုဒိမ်းမှုတွေကိုပြင်းထန်စွာအပြစ်ပေးရန်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မိခင်တွေထဲကတစ်ယောက်မို့ သက်ငယ်မုဒိမ်းမှုတွေကိုပြင်းထန်စွာအပြစ်ပေးရန်အူဝဲတောင်းဆို…. 1 အူဝဲရေးသားချက်ကတော့”သမီးတယောက်ရဲ့ အမေအဖြစ်ရှိနေတဲ့ အူဝဲအတွက်တော့ အရမ်းခံစားရတယ်အမှုမှန် […]
မီးလင်းတဲ့​ ဂါဝန်​​လေးနဲ့ က​လေးလေး တစ်​​ယောက်​လို​ပျော်​​နေတဲ့ အသဲတုံးလေး​ဖွေး​ဖွေးရဲ့ ချစ်စရာဗီဒီယိုလေး
By SPACEPosted on June 30, 2019 June 30, 2019
မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ အကျော်ကြားဆုံး မင်းသမီးတွေထဲက တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဖွေးဖွေးကတော့ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာ ထူးချွန်တာကြောင့်ရော နူးနူးညံ့ညံ့နဲ့ ချစ်စရာကောင်း တာကြောင့်ပါ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးခြင်းကို အပြည့်အဝ ရရှိထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောမှာတော့ ဖွေးဖွေးက Hearty Heart […]
မြွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မက်တတ်တဲ့ အိပ်မက်တွေကို အတိတ်နိမိတ်ယူနည်း
မြွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မက်တတ်တဲ့ အိပ်မက်တွေကို အတိတ်နိမိတ်ယူနည်း အိပ်မက်မက်တယ်ဆိုတာ ထူးဆန်းတဲ့ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး သင်မက်တဲ့ အိပ်မက်တွေက သင်မကြာခင်မှာ ကြုံတွေ့ရမယ့် ကံကြမ္မာနဲ့ဆက်စပ်မှုတွေ ရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်အိပ်မက်ထဲမှာ မြွေကို မြင်တွေ့ရတဲ့အခါ မကြာခင် သင်ကြုံတွေ့ […]
သင့်ကို မေတ္တာရှိနေပေမယ့် ဖွင့်မပြောရဲတဲ့ ယောကျာ်းတစ်ယောက်ရဲ့ အမူအကျင့်များ
ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်အတွက် မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ချစ်တယ်လို့ဖွင့်ပြောဖို့က ထင်တာထက်ပိုခက်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေကျရင် ဖွင့်ပြောဖို့ကြောက်လို့ မြိုသိပ်ထားတာမျိုးတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့အပြုအမူက ဒီလိုလေးတွေ ဖြစ်နေပြီး သင့်ဘက်ကလည်း သဘောကျတဲ့သူဆိုရင်တော့ သင်ကစပြီး ခြေလှမ်းသင့်ရင်လည်းလှမ်းရပါမယ်နော်။ (၁) သင့်အနီးမှာရှိတဲ့အခါရှက်နေမယ် မိန်းကလေးတွေပဲရှက်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ […]
” ညရော နေ့ပါ ဒုက္ခပေး အိမ်မှာသောင်းကျန်းနေတဲ့ ကြမ်းပိုးတွေကို အလွယ်ကူဆုံးနှင့် ငွေကြေးအကုန်အကျသက်သာစွာ မျိုးပြုတ်အောင် တိုက်ထုတ်ကြမယ် “
မိဘများက မိမိတို့ရဲ့ ရင်သွေးကလေးများကို ဖဝါးလက်နှစ်လုံး ပခုံးလက်နှစ်သစ် လူဖြစ်လာကတည်းက ဝါးဖတ်တော် ကစီဓာတ်နဲ့လူဖြစ်အောင် ကျွေးမွေးလာခဲ့ကြတဲ့အပြင် ခြင်။ကြမ်းပိုး မထိုးရအောင် ဂရုစိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ညကျရင် ကလေးအိပ်ရာထဲမှာ ကြမ်းပိုးရှာပေးရတာနဲ့ မအိပ်ရတဲ့ မိဘတွေရှိကြပါတယ်။ မေတ္တာပို့တဲ့အထဲမှာ ကြွက် ခြင် […]